Mudaaharaad dhaliyay khasaare dhaawac oo ka dhacay Laascaanood – SBC
Mudaaharaad dhaliyay khasaare dhaawac oo ka dhacay Laascaanood
Maanta Magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool waxaa ka dhacay mudaaharaad balaaran oo ay soo qaban qaabiyeen ardayda dhigata dugsi ku yaala magaaladaas oo lagu magacaabo Muse Yuusuf,
Mudaaharaadka ayaa yimid ka dib markii ay ciidamada Maamulka Somaliland ee halkaasi ku sugani ay xireen macalin wax ka dhigayay dugsigaasi, waxaanay ka dib bilaabeen ardayda sugsiga iyo dadweyne kale in ay ku dhaqaaqaan mudaaharaad xoogleh.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in mudaaharaadkaasi ay ku dhaawacmeen 3 ka mid ah ardaydii banaan baxa dhigeysay, Mid ka mid ah Sadexda ardey ayaa xaaladiisa Caadimaad waxaa la sheegay inay tahay mid aad u liidata loo qaaday dhanka caasimada Dowlada Puntland ee Garoowe halka 2da kalena lagu dabiibayo gudaha magaalada Laascaano .
Waxaa sidoo kale ay xaqiijiyeen ilo wareedyo halkaasi ku sugan in ciidamada Somaliland ay xabsiga dhigeen tiro dad ah oo aan la xaqiijin Karin tirade ay yihiin kuwaas oo ka mid ahaa dadkii banaan baxa dhigayay.
Sikastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in wadooyinka waaweyn ee magaalada Laascaanood la dhoobay ciidan farabadan oo ka tirsan maamulka la baxay Soomaaliland ee halkaasi xooga ku jooga, kuwaas oo baaritaan iyo howlo qabqabasho halkaasi ka wada .
Macalinka ay maanta xireen ciidamada Soomaaliland islamarkaana ay ka dhasheen banaan baxyadan sababay khasaaraha dhaawac ayaa waxay ku eedeeyeen in uu lug ku leeyahay falal amaan xumi oo maalmihii ugu dambeeyay ka jiray magaaladaas.
Cali Cismaan Yuusuf (Cali Dhagjar)
SBC International Buuhoodle